ဘုန်းကျော်: Sep 27, 2010
နိုဝင်ဘာ ၇ -ရက်နေ့ မှာ တိုက်ပွဲစမယ်ရဲဘော်တို့ ...။
၁-လူထုကို ဘာကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲကို ကန့် ကန်ဆန္ဒပြရတာလဲ ဆိုတာကို ဘယ်လိုပြောမလဲ?
၂-သင်တို့ ရဲ့ မိန့် ခွန်းတွေထဲမှာ ဘာတွေထည့်ပြောမလဲ?
၄-သူတို့ ပါဝင်လာရင် လူထုကို ဘာတာဝန်တွေပေးမလဲ?
၈- ပိုစတာတွေ၊ ဘန်ဒါတွေကိုဘယ်သူလုပ်လဲ ၊ ဘာတွေရေးမလဲ?
၉- အလုပ်သမားတွေကို ဘယ်သူသွားစည်းရုံးမလဲ?
၁၁- ချီတက်ပွဲဖြစ်လာရင် ဘယ်နစ်ယောက်တန်းချီတက်မလဲ?
၁၃- လမ်းဘေးက အားပေးနေတဲ့သူတွေကို အတူတူချီတက်လာအောင် ဘယ်သူက ခေါ်မလဲ?
၁၄- တိုက်ပေါ်ကနေကြည့်ပြီး အားပေးနေတဲ့သူတွေကိုပါလာအောင် ဘယ်သူက စည်းရုံးမလဲ?
၁၅- မြို့ သစ်တွေမှာလည်း ဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်လာအောင်ဘယ်သူက စည်းရုံးမလဲ ၊ ဘယ်လိုစည်းရုံးမလဲ?
၁၆- ကြံဖွတ်နဲ့ စွမ်းအားရှင်တွေက နှောက်ယှက်လာရင် ဘယ်လို တုန့် ပြန်မလဲ၊( ပြန်ချမလား၊ သူတို့ ရိုက်တာခံမလား )?
၁၇- ရဲနဲ့စစ်သားတွေက ပြစ်ခတ်ဖို့လာရင် ချီတက်နေတာကိုရပ်ပြစ်မလား။ လူစုခွဲမလား။ ဆက်ပြီးအသေခံချီတက်မလား?
၁၈- ပြစ်ခတ်နိမ်နင်းလာရင် ကားလမ်းတွေကို ဘယ်သူပိတ်မလဲ?
၁၉- အစိုးရကားတွေကို ဘယ်သူက မီးရှို့ မလဲ?
၂၀ - ဆက်သွယ်ရေး၊ စနစ်တွေ ဘယ်လို ထူထောင်ထားမလဲ ( တယ်လီဖုန်း၊ စက်ဘီး၊ ကား၊ ဆက်သား၊ )?
၂၁- ရန်ကုန်က လှုပ်ရှားမှုကိုနယ်တွေသိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
၂၂- နယ်တွေဖက်မှာ ပြန့် နှံသွားအောင် ဘယ်သူ တာဝန်ယူမလဲ?
၂၃- စက်ရုံတွေကို ဘယ်သူတွေက သိမ်းပိုက်ထားမလဲ?
၂၄- သပိတ်ကို ရေရည် ဆွဲနိင်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
၂၅- လူထုအစိုးရကို ဘယ်လို ဖွဲ့ မလဲ?
၂၆- မီဒီယာတွေကို ဘယ်သူက တာဝန်ခံဖြေမှာလဲ ။ တတိုင်းပြည်လုံးကိုဘယ်ြလိုမက်ဆေ့ခ်ျပေးမှာလဲ?
၂၇- ကိုယ်ရပ်ကွက်အလိုက်ကျေးရွာအလိုက် အုပ်ချုပ်ရေးတွေ ကိုဘယ်လိုချမလဲ (လုံခြုံရေး၊ အပြန်အလှန်ကူညီရေး၊ လူထု စားဝတ်နေရးကျမာရေး )?
၂၈- ရံပုံငွေတွေကိုစနစ်တကျ ဘယ်လိုကောက်ခံမလဲ?
၂၉- သံရုံးတွေကို ဘယ်လို အသုံးချမလဲ?
၃၀- ကားလမ်း၊ရထားလမ်း၊ သင်္ဘေဆိပ်တွေကို ဘယ်လို ထိမ်းသိမ်းမလဲ ၊ဖြတ်တောက်မလဲ?
၃၁- သံရုံးတွေရဲ့ အကူညီကိုဘယ်လိုယူမလဲ?
၃၂- စစ်အစိုးရဒေါက်တိုင်တွေကို ဘယ်လိုဖြိုမလဲ၊ ဘယ်သူတွေဖြိုမလဲ ၊ ပြစ်မှတ်တွေကိုဘယ်လိုပြုစုထားမလဲ?
မှတ်ချက်။ ။ လိုအပ်တာတွေကိုဖြည့်စွတ်ပြီး ကိုမိုးသီးအီးမေး wefightwewin@gmail.com ကိုပို့ပေးကြပါ။ ကျနော်တို့တော်လှန်ရေးရဲ့ အောင်ပွဲကို လိုချင်သူများ မိမိနီးစပ်ရာ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများ၊ ညီအစ်အကိုမောင်နှများအား ယခုမေးခွန်းများအားပို့ပေးကြပါ။ အားလုံးအခုကတည်းက တိုက်ပွဲကိုစတင်အကောင်အထည်ဖော်လို့ရပါပြီ။ နိုဝင်ဘာလ-ရက်နေ့မှာ သမိုင်းမှာ မကြုံစဖူးတဲ့လူထုအုံကြွမှုဖြစ်လာရစေမယ်။
စစ်အာဏာရှင်တွေကို နိုဝင်ဘာ (ရ) ရက်နေ့မှာ မြန်မာ့မြေက အပြီးအပိုင်မောင်းထုတ်ပြစ်ကြပါစို့။
စစ်တပ်၊ ရဲ၊ စွမ်းအားရှင်စတဲ့ အာဏာရှင်လက်ကိုင်ဒုတ်တွေ လူထုတွေကို ပြန်လည်တိုက်ခိုက်လာနိုင်ပါတယ်။
တိုက်ခိုက်မယ်လို့လည်း ယုံကြည်တယ်။ ဒီတော့ လူတိုင်းမိမိအိမ်မှာရှိတဲ့ သေနတ်၊ တုတ်၊ ဓား၊ ဒူးလေး စတဲ့အရာတွေကို အသင့်ပြင်ထားကြပါ။ ဆန္ဒပြပွဲဖြစ်တာနဲ့တခါတည်းယူသွားပါ။
မျိုးချစ်စစ်သားများ၊ အမှန်တရားကို သိတဲ့စစ်တပ်၊ ရဲ ဘက်ကအရာရှိများ လူထုဘက်က ရပ်တည်ကာကွယ်ပေးကြပါ။ နိုဝင်ဘာ (၇) ရက်နေ့မှာ ပြည်သူနဲ့အာဏာရှင်တို့ အဆုံးသတ်တိုက်မဲ့ပွဲဖြစ်တယ်။ ဒီအချိန်မှာ လူတိုင်းလူတိုင်းခေါင်းဆောင်တွေပဲ။ ကိုယ့်အသက်ကို ကိုယ်ပဲကာကွယ်ပါ။ မိမိရန်သူကို ရရာလက်နက်နဲ့ခုခံတိုက်ပွဲဝင်ကြပါ။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Monday, September 27, 2010